Sysomos Gaze: Kormeerka Sawirka iyo Muuqaalka ee Baraha Bulshada | Martech Zone
Sysomos Gaze: Kormeerka Sawirka iyo Muuqaalka ee Baraha Bulshada
Wednesday, September 16, 2015 Arbacada, Oktoobar 19, 2016 Douglas Karr
Waxaad tahay astaan ​​qaran oo macaamil si xun loola dhaqmay ayaa kula wadaagaya sawir ceeb ah astaantaada baraha bulshada. Kuma tageynayaan sawirka, laakiin way fiicantahay inaadan wadaagin. Waxay ku dhacdaa fayras ka hor intaadan ogaanin, digniintaada kormeerka ayaa sii soconaysa maaddaama bogagga horudhaca ay bilaabayaan inay kugu xusaan oo ay wadaagaan sawirka internetka.
Hawl-wadeenadu hore ayey ula wareegtay waqtiguna waa udub-dhexaad, laakiin adigu waad habsan tahay. Waxaad ku jirtaa habka difaaca. Waxaad sameyneysaa hadal, si khushuucsan u raali geliso, waxaadna ku dadaashaa inaad ka dhigto macaamilka.
Ka waran haddii jid kale jiro? Kawaran haddii uu jiray adeeg aqoonsaday astaantaada sawirka oo kugu wargeliyay waqtiga dhabta ah ee wax dhacay. Shabakada yar ee aragtay sawirka dhexdiisa, waxay ku arkeen jawaabtaada dhowr lakab. Waxaa laga yaabaa inaad gadaal gadaal gadaal uga riixeyso raali gelin iyo lacag celin. In kasta oo aysan ka hor istaageynin sawirka inuu faafo, qof kasta oo go'aansada inuu wax ka qoro burburka sidoo kale wuxuu la wadaagayaa jawaabtaada.
Halkii aad u ekaan lahayd summad xun oo aan dan ka lahayn, waxaad hadda u egtahay nooc sumcadda dhageysanaya macaamiishaada. Tani waa faa'iidada ka dambeysa Sysomos Gaze (horay Gazemetrics) - Bixinta muuqaalka iyo kormeerka fiidiyowga ee warbaahinta bulshada, Analytics, maaraynta ololaha iyo warbixinta.
Maareynta astaan ​​caafimaad uma baahna oo keliya in la ogaado cidda ka hadlaysa magacaaga, wax soo saarkaaga ama adeeggaaga - laakiin sidoo kale waxay u baahan tahay muuqaalada ay wadaagayaan iyo kuwa arkaya. Sysomos Gaze waxay kaheleysaa sawirada astaantaada guud ahaan wadiiqooyinka bulshada waxayna isugu keeneysaa hal meel.
Sysomos Gaze sidoo kale waxtar ayey u leedahay maareynta xuquuqda dijitaalka, taasoo u oggolaaneysa sumadaha inay si fudud ula xiriiraan dadka isticmaala sawirrada soo dhejiyay. Astaamaha ayaa weydiisan kara rukhsad si ay dib ugu daabacaan sawirrada adeegsadaha soo saaray kanaalkooda, iyagoo u rogaya waxyaabahaas hantida u shaqeysa astaanta.
Waxaad sidoo kale la socon kartaa muuqaalka iyo muuqaalka fiidiyowga waqti ka dib Sysomos Gaze Analytics.
Ku saabsan Sysomos
Sysomos waa shirkadda sirdoonka bulshada ee ku shaqeysa sayniska xogta ee siisa ganacsiyada duruuf durugsan boqolaal milyan oo wada sheekeysi ah oo maalin walba ka dhaca khadka tooska ah. Barmaamijka sirdoonka bulshada ee Sysomos wuxuu si isdaba joog ah u go’aaminayaa wada sheekaysigan iyo sheekooyinka wararka si uu suuqleyda u siiyo jawaabo dhab ah oo ku saabsan waxa macaamiishoodu ka fikiraan oo ay dareemaan.
Raadi oo daawee sawirada bulshada ee macaamiisha fayraska dhabta ah iyo fiidiyowyada macaamiisha isla aragtida.
Toos u codso shaqo socodsiinta awood u siinta suuqleyda inay si fudud uga soo ururiyaan rukhsadaha macaamiisha inay u adeegsadaan sawiradooda iyo fiidiyowyadooda ololayaasha suuqgeynta
Kufiiri dhise waxyaabaha ku jira Smartlists: Suuqyayaashu waxay dhisi karaan ururinta sawirro ku saleysan astaamaha muuqaalka iyagoo dooranaya tiro sawirro ah oo leh walxo uu suuqku doonayo inuu kormeero ama daaweeyo.
La soco oo hawl geli oo leh saamileyaal Instagram iyo Twitter ah, iyagoo ka hela aragtiyo ku saabsan astaamahooda gaarka ah, isku xirnaanshaha iyo waxqabadyadooda
In ka badan 1500 magac iyo wakaalado, oo ay ku jiraan boqolkiiba 80 noocyada adduunka ugu qiimaha badan, sida ay u kala saarto Interbrand, waxay ku aaminaan Sysomos sirdoonkooda bulsheed. Sysomos waxay xafiisyo ku leedahay toddobo magaalo oo adduunka ah, oo ay ku jiraan London, New York, San Francisco iyo Toronto.
Tags: aqoonsiga sumaddakormeerka sumaddagazemetricsdigniinta sawirkakormeerka sawirkaaqoonsiga astaantakormeerka warbaahinta bulshadasysomossysomos eegdigniinta fiidiyowgakormeerka fiidiyaha
Hordhac Net Leads Net: Aqoonso oo dir Hogaamiyaasha ugufiican Salesforce